SARIIRAHA DHAGAXYADA LEH GACMAHOODA KU YAALA AQALKA: SIDA LOO SAMEEYO SARIIRTA DHAGAX - SARIIRTA UBAXA
Nashqadeeyaha muuqaalku waxay awoodeen inay isticmaalaan qaylada isku dhafka ah ee dhagxaanta adag iyo ubaxyo jilicsan oo soo jiidasho leh si loo abuuro sawirro dhalaalaya oo muuqaal leh. Maanta, isbeddelkan muuqaalkani wuxuu qabsadey naqshadeynta naqshadaha beeraha, beeraha iyo goobaha dalka. Samee sariirta dhagaxyada leh qof kasta oo gacmahooda leh. Maxaa loo baahan yahay arrintan, waa maxay waxyaabaha la dooranayo iyo meesha laga bilaabo - waxaan ka sheekeyn doonaa wax walba tan dambe ee maqaalka.
Sariirta dhagaxa ah, dhagax weyn oo dhagax ah
Newbies ee beerta jardiinooyinka ayaa inta badan ku wareersan jardiinooyinka dhirta dhagax leh dhagaxyo iyo jardiinooyin dhagax ah. Xaqiiqdii, tani ma aha wax la mid ah. Faraqa ugu weyn ee qaababka qurxinta ayaa ku jira fikradda muhimka ah, tiknoolajiyada abuuritaanka, walxaha iyo miisaanka.
Ma taqaanaa? Horudhaca moodooyinka dhagaxyada ee beerta waa jasiiradda. In ka badan kun kun sano ka hor, joogitaanka ku jira cawska ubaxyada ee qoryaha waaweyn ee la daboolay maqaarka cagaaran iyo bullaacad ayaa loo tixgeliyaa sifo aan loo baahnayn oo falsafad iyo fikirka ku saabsan nolosha.
Si loo abuuro xuduudda xadka ee beerta ubaxa ma jirto baahi loo qabo in si taxadar leh u xulato mid kasta oo jajabkeeda ah, sida kiiska beerta dhagaxa. Xayawaanka Alpine marwalba waxay u muuqdaan kuwo aad u ballaaran. Xirfadlayaashu waxay tixgeliyaan dhismaha ugu adag ee qurxinta beerta. Ka dib oo dhan, naqshadeeye ayaa wajahaya hawsha kaliya ee aan ku dhicin buurta dhagaxyada iyo dhirta ubaxyada dhirta u dhexeeya iyaga, laakiin sida ugu dhow ee suurtogalka ah in uu abuuro dhul dabiici ah oo dabiiciga ah. Tani waxaa ka mid ah diyaar garow ballaaran oo loogu talagalay dhisidda farsamo ee jawi buureed oo ku yaal aagga beerta.
Waxay ka kooban tahay qodidda godadka iyo saarida lakabka dheecaan leh, iyada oo la tixgelinayo xajmiga dusha sare ee qoyaanka. Qalabkaas oo kale, dhirta ayaa si taxadar leh loo xushay, siinta siyaabaha dhaqanka dhagaxyada gaarka ah leh oo leh xididada si wanaagsan loo horumariyey.
Qaar ka mid ah isku mid ah ayaa laga arki karaa qaabka caadiga ah ee sariirta dhagaxyada iyo dhagaxyada. Hase yeeshee, nambarka ugu dambeeya, maqalaha ayaa loo rogay dhirta, laakiin waa macdan, taas oo ay tahay in ay udhexeeyaan midab, midab, cabbir. Marka la dhigo, dabeecadda iyo asmaab la'aanta waa suurad wacan. Waxyaabaha qasabka ah ee ku jira dhismahan waa dheecaan. Ku beeray dhagaxdheer, sida doorashooyinka beeraha oo si tartiib ah u koraya iyo kuwa adag.
Ma taqaanaa? Beeraha ubaxa ee Steven ee Europe ayaa yimid dhamaadkii qarnigii XVI. Waxay ku yaalliin barxada aristocrats, dhirta khaaska ah oo keliya oo laga soo galo dhulka buuraha ayaa lagu beeray iyaga.
Sariiraha ubaxa uma baahna dheecaan, waxay leeyihiin hab fudud oo lagu doorto dhirta, qaybta dhagaxu waxay ka ciyaaraan kaalin wax ku ool ah oo ku saabsan qurxinta. Tani waa qaab qurux badan.
Laga soo bilaabo sawirka waxaad xaqiijin kartaa in aad dhiseysid ubaxyadaada ka sameysma dhagaxyada uma baahna aqoon, xirfad iyo awoodo. Aad ayey u fududahay qof walba.
Clarkia, heliotrope, ilaawi-aan-liiska, rudbeckia, liatris, echinacea purpurea, yarrow, dhirbaaxo, dhalinyaro, alissum, fescue grey, catnip, rue, maqaakada sage, Carpathian bell.
Doorashada macdanta waxay ku xiran tahay heerka cabirka iyo doorbidkaaga ku saabsan qaabka dhismaha, dhirta iyo fikradda guud. Haddii aad uur leedahay wax weyn, markaa wax waliba waa inay ahaato mid habboon.
Marka aagga uu ku filan yahay qaabab yar, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ku qurxiso dhagaxyo yaryar. Aynu si faahfaahin ah u falanqee dhagaxyada qurxinta ee caanka ah ee ubaxyada.
Marka aad eegto dhagaxyada dabiiciga ah ee beerta, si dagdag ah u yimaaddaan gabagabada ah in aysan jirin wax kaamil ka badan Xayawaanka Dabeecadda. Ma ahan qof keliya waqti gaaban wuxuu awoodi doonaa inuu ku koro dhadhanka ama lichen oo ah cawska mugdiga ah. Naqshadayaashu waxay kaliya u sameysan karaan farshaxan sheekooyin. Macdanta dabiiciga ah waxaa lagu qiimeeyaa nadiifnimada deegaanka iyo cimilada. Geedka ubaxa ee qaabka la midka ah ayaa noqda mid dabiiciyan ah oo macquul ah.
Waa muhiim! Dhagaxyada hore waxaa lagu qiimeeyaa kuwo aad u yar, sababtoo ah waxay ku adkaadeen waqti, dabayl iyo biyo. Hoyga, da 'dabiiciga ah ee "gabow" nuujin cusub waa mid dhab ah iyadoo la adeegsanayo asalka khudradda. Waa ku filan inaad ku shubtid dareeraha dusha sare iyo boogta. Ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ku dhaqdo aashitada, dusha sare u qaado bacriminta waxsoosaarka macdanta ah ("Ideal"), si khafiif ah ula xoqdo boodhka carrada iyo abuur dhir.
Noocyada kala duwan ee dhagaxyada dabiiciga ah waa kuwo caan ah:
Quartzite - waa nooc qurux badan oo leh siyaalo badan. Qulqulaha awoodda iyo iska caabinta kiimikooyinka iyo heerkulka isbedbedelka heerkulka. Sida muraayad, waxay ka tarjumaysaa iftiinka, ku shubmiddeeda muraayad kasta oo leh muuqaal cusub.
Sandstone - Muujin muhiim ah ee macdantaasi waxay ku jirtaa qulqulka iyo udubdhiska qaabdhismeedka, halkaasoo ah meesha ugu culus - jabka. Dhagaxyada waaweyn ee dhagaxyada waaweyn iyo qashin-xayawaanka ee noocyada kala duwan ee taranka ayaa aad ugu habboon sariiro beeraha koraya. id: 37152
Limestone - ayaa iska leh noocyada buurta. Inta badan waxaa laga helaa midab buluug ah, oo marar badan leh - midab huruud ah, casaan iyo xitaa buluug. Waa wax aad u bacrin ah oo loogu talagalay gabalka.
Gaadiidka - wuxuu isku uruuriyaa dhagaxyo dhowr ah waxaana lagu kala saaraa qaab dhismeed. Dhagaxdu si fudud ayey u jajabisaa taarikada kala duwan. Sidaa daraadeed, maaddada waxaa inta badan loo isticmaalaa sida jajabka.
Basalt - Tani waa qalab aad u adag oo adag oo loogu talagalay cawska cawska, taas oo ay sababtay dhimashada magma.
Granit - Beereyaalku waxay doorbidaan helitaanka, muuqaalka jimicsiga, dhaxan sare iyo caabbinta qoyaanka. Dhibaatada kaliya ee laf dhabarta ah ee awoodda ay u leedahay in ay oxidize ciidda.
Gneiss - Caanahan oo ah matamoorficiga ayaa ka muuqda midabo kale oo aan caadi ahayn.
Tufaaxa Volcanic - Thanks to sariiraha terracotta ee taranka, waxaa awood u leh inay abuuraan jawi kulul ee beerta ubaxa. Waa mid aad u adag.
Culeyska - waxaa loo isticmaalaa sidii xayawaan dhagax ah oo loogu talagalay sariiro yaryar, marwalba loo dhigo lakabka sibidhka.
Waa muhiim! Mid ka mid ah halabuurka waxaa habboon in la dhigo dhagaxyo leh sifooyin shucaac ah oo isku mid ah. Tusaale ahaan, xaafad nasiib darro ah granite leh nuurad ah waxay saameyn xun ku yeelan doontaa sida aysidhka carrada iyo ka kooban. Xaqiiqdu waxay tahay in qalabkaani uu si kala duwan u falceliyo isbedelka cimilada iyo xaaladaha cimilada. Haa, mana arki doonaan.
Dhagaxyada macmalka ah waxaa laga sameeyaa acrylic, polyester-ka iyo jajabyada dabiiciga ah. Dibedda iyo qummanaanta, mararka qaarkood way adagtahay in la kala saaro waxsoosaarka dabiiciga ah. Nolol maalmeedka leh walxahaas oo kale waxay qurxiyaan daaqadaha dhismaha, talaabooyinka, balliinka beerta iyo xitaa alaabta guriga.
Aragtida cirridka iyo korontada - faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee dhagaxyada macmalka. Tani waxay la mid tahay, ma u dulqaadanayaan isbeddelka isbedelka heerkulka, marmarka qaarkoodna waxay ku xiri karaan xiriirka dheeraadka ah ee dhulka. Qurxinta ma aha mid raqiis ah.
On xuduudaha dhagxan macmacaan sariiraha ubax, ka dhigay gacmahaaga, fit:
Tuur - Tilmaamo ama noocyo kala duwan oo dhoobo ah ayaa loo isticmaalaa ujeedooyinka beerta. Qaabkeeduna wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo saarto qaababka joomatari ee cad.
Gaadiidka - oo lagu tilmaamayo kala qaybsanaan yar, waa muraayado madow iyo madow.
Waxyeelo polymer ah - wuxuu ka kooban yahay ciid, sibidhis iyo walxaha kale ee polymeric, si fiican u dulqaadanaya qoyaanka, qabow.
Ma taqaanaa? Cilmi-nafsi yaqaanadu waxay yiraahdaan qaababka wareegsan ee dhagaxyada beerta ayaa dadka ku dhiirrigeliya oo ku dhajiya daacadnimo, diirranaan, iyo qaabab adag oo muuqaal ah oo maskaxda ku haya maskaxdiisa iyo xanaaq.
Waxaa jira kala duwanaansho badan oo ah ubaxyo qurux badan oo laga sameeyey gacmahaaga. Marka laga hadlaayo, ninkii beerta ka shaqeeyaa waa in uu hagaa awooddooda iyo mudnaanta. Qaar waxay ku kacaan dhagxaanta dhagaxa ah ee dabiiciga ah, kuwa kalena waxay ka soo baxaan joomatarka joometeriga ah ama qaababka asimmetrical ah.
Iyo qaar ka mid ah jardiinooyinka waxaad arki kartaa sariiraha ubaxyada oo kor u kacay oo derbiyada dhagaxa ah, oo dhererkoodu uu gaari karo 1 m.
Meelaha laga helo meel bannaan, bannaanka xirfadlayaasha ah ayaa maareynaya in la abuuro beeraha ubaxa dhirta oo ah qaabka muraayadaha casriga ah iyo qaababka kale ee dhismaha. Sidaas darteed beerta ma aha oo kaliya lagu qurxiyo, laakiin sidoo kale u qaybsan aagagga.
Haddii aad hore u qancisay fikraddaada ku saabsan qorsheynta beerta ubaxa, waxaad bilaabi kartaa qorsheyn. Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad go'aansato qiyaasta iyo alaabta dhismaha, ka dibna waxaad bilowdaa inaad riyadu xaqiiqda ka dhigto.
Waa muhiim! Si loo yareeyo wasakheynta dhagaxyada dhagaxa ah, xudduudkooda ayaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo laysku ilaaliyo hiddo-biyeedka. Intaa waxaa dheer, walaxda waxay keeneysaa muuqaal aad u iftiiminaya midabka maaddada.
Meeleynta sariirta ubaxa
Sida laga soo xigtay khabiirada, meelaha dhagaxaantu waxay u baahan yihiin in si gaar ah loogu qorsheeyo meelaha qorraxda ah ee dabaylaha woqooyiga iyo qaanuunku aanay ku dhicin, iyo hawo qabow, dhalaalid iyo biyaha roobka kuma urursan. Diirad gaar ah marka aad dooranaysid boos loogu talagalay sariirta ubaxa waa in la siiyaa dhirta aad qorshaynaysid inaad ku beertid.
In naqshadeynta dhoobada dhagaxyada waxaa jira xeerar qaar oo si weyn u fududeyn doona qorsheynta dhismaha:
Qorshaha sariiraha ubaxa waa inaysan faragelinin dhaqdhaqaaqa beerta. Waxay u fiicantahay in ay jebiso daaqadaha guriga, weelka xayndaabka ama beerta dhexe. Howsha ugu weyn ee ubaxa waa in la keeno farxad.
Goobaha furan waa caado ah in la jebiyo hareeraha wareegga, sariiraha ubaxa ama sariiraha. Waa inay u furan yihiin kormeer dhammaan dhinacyada. Daanyeerka iyo derbiyada waxay sameeyaan qaabab qaddarin ah.
Maaha inay jiraan dhagaxyo badan, si aanay u badalin muusigyada.
Ubaxa sariirta ubaxa waa in lagu xushaa shuruudaha isku midka ah ee carrada, iftiinka, qoyaanka iyo heerkulka. Tusaale ahaan, marigolds waxay doorbidaan goobaha qorraxdu ka baxdo, sidaa daraadeed ma ayan kari kari kareynin oo ay la jaanqaadi karaan fernan-jilicsan. Waa inaad sidoo kale tixgelisaa waqtiga dhirta ubaxyada, isku dhafka midabada iyo dhererka.
Ha isku dhibin naqshadaha jilicsan ee adag in la keeno nolosha.
Tirada sariiraha ubaxa, iyo sidoo kale waxay ku xiran yihiin wadarta guud ee beerta. Laakiin marwalba way fududahay in la qalabeeyo hal sariirood oo waaweyn oo ka yar kuwa yar yar.
Marka aad diyaarinayso beerta ubaxa, waxaad sameyn kartaa dhowr nooc oo kala duwan, kaliya hubi inaad tixgeliso isku dhafka midabka, qaabka iyo qaabka. Tusaale ahaan, dusha sare ee dhejisku wuxuu isku dhejiyaa sandstone dabacsan, laakiin leh granite awood leh ma arki doonto.
Haddii aad la shaqeysid dhowr macdan, aad u taxadar leh iskudhafka midabada. Shaqadaadu waa inaad sameysid sawir isku dhafan. Sidaa darteed, waxay door bidaan midabyo mugdi ah ama madow. Ha ku tijaabinin casaan, midab jaalle ah oo cawska lagu raaxaysto leh beer isku mid ah.
Xuduudda, waa suurad wacan in la isticmaalo dhagaxyada isla qaabka iyo cabbirka.
Habka Flowerbed waa in aan ka baxsan qaabeynta guud ee beerta.
Waa muhiim! Sariir caleenta ah oo leh walxaha dharka suntan ee dhowr sano ayaa u baahan dib u cusbooneysiin dhab ah. Tani waxay sabab u tahay dabeecadaha la midka ah ee taranka, taas oo sanadaha ka dib bilaabi doona inay uqaadaan.
Qabashada sariiraha oo dhan waxay ku bilaabataa sawir. Ka dib markaa waxaad gacanta ku dhejin kartaa qiyaasta cajaladaha iyo qoryaha alwaaxda si aad u isticmaasho xarumaha. Shaqo dheeraad ah waxay ku xirnaan doontaa walxaha la soo xulay.
Haddii ubaxyada mustaqbalka ay ku salaysnaan doonaan qashinka, waa ku filan in ay jiifaan kabaha dhagaxa ah ee dhagaxa ah (sandstone, slate, nuurad) meel sare ee midba midka kale. Iyada oo la adeegsanayo farsamada la midka ah, waxaad ku shaqeyn kartaa dhismayaasha yar yar ee qoryaha waaweyn. Kaliya qaybteeda hoose waxay u baahan tahay in la yareeyo dhulka.
Si aad beertaada uga dhigto mid aan loo adkaysan karin oo dabacsan, dhis dhisaal, kursi ku yaal ama ku qurxin kara farshaxan.
Haddii aan ka hadleyno macdanta adag, webiyada ama badda, waxaad u baahan doontaa inaad fuliso shamiinta. Tani waa nooc ka mid ah xudduud wanaagsan oo u taagan istaandarada ama xitaa boqolaal sano.
Marka hore, hareeraha wareegga qorraxda qoraalka ah, waxaad u baahan tahay inaad ku qodo tuubo gacmeed (ilaa 20 cm), daboolka hoose ee ku dheji lakabka 15 cm ee qashinka dhismaha ama qashinka. Kadibna lakabka hoobiyaha cement-ciid qarada waxaa loo diyaariyey on, diyaarisay in cabirku yahay 1: 3. Dhaqdhaqaaqyada waxay soo saaraan lakabyo, iskudubarid clamp. Isla mar ahaantaana, shaqadu waa inay nadiif noqotaa si uusan dhexdhexaadiyuhu u muujin dhinaca hore. Xuduudu waxay samaysaa dhererka la doonayo. Masaajuradu waxay tagtaa 3 maalmood si ay u qalalaan, kadibna waxay ku seexdaan ciidda ubaxa ah, isku dhaji oo sii wad ubaxyada dhirta.
Waa muhiim! Waxaa lagula talinayaa in lagu beero dhirta dheer ee sariirta ubax leh qashin waaweyn oo sarreeya.
Wixii dhismaha beerta ubaxa dhagaxa ah ee ku yaala goobtaada ma aha qasab in ay marti-geliyaan naqshadeeyayaasha. Haddii aad rabto, waxaa suurtagal ah in si madaxbanaan loo ogaado riyadaada.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Sariirta ubaxa 2019